लूका ६ | अनलाइन बाइबल | नयाँ संसार अनुवाद (२०१०)
६ एक पटक विश्राम-दिनको बेला उहाँ गहुँको खेत हुँदै गइरहनुभएको थियो र उहाँका चेलाहरू गहुँका बालाहरू टिपेर हातले माड्दै खाइरहेका थिए। २ यो देखेर केही फरिसीहरूले यसो भने: “विश्राम-दिनमा गर्न नहुने काम गरेर तिमीहरू किन नियम उल्लङ्घन गरिरहेका छौ?” ३ तर येशूले तिनीहरूलाई जवाफ दिनुभयो: “के तिमीहरूले कहिल्यै पढेका छैनौ, आफू र आफ्ना मानिसहरू भोकाउँदा दाऊदले के गरे? ४ कसरी तिनी परमेश्वरको भवनभित्र पसे र पुजारीहरूबाहेक अरूले खानु अनुचित भए तापनि परमेश्वरलाई चढाइएका रोटीहरू लिएर खाए अनि आफ्ना मानिसहरूलाई पनि केही दिए?” ५ अनि उहाँले तिनीहरूलाई अझै यसो भन्नुभयो: “मानिसको छोरा नै विश्राम-दिनको प्रभु हो।” ६ त्यस्तै अर्को विश्राम-दिनको बेला उहाँ सभाघरभित्र पसेर सिकाउन थाल्नुभयो। अनि त्यहाँ दाहिने हात सुकेको एक जना मानिस थियो। ७ उहाँलाई दोष लगाउने निहुँ भेट्टाउन शास्त्री र फरिसीहरू उहाँले विश्राम-दिनमा निको पार्नुहुन्छ कि हुन्न भनेर उहाँलाई नियालिरहेका थिए। ८ तर तिनीहरू के सोचिरहेका छन्‌ भनेर उहाँलाई थाह थियो। तैपनि, उहाँले हात सुकेको त्यस मानिसलाई भन्नुभयो: “उठ र बीचमा उभ।” तब त्यो मानिस उठेर बीचमा उभियो। ९ त्यसपछि, येशूले तिनीहरूलाई भन्नुभयो: “म तिमीहरूलाई सोध्छु, विश्राम-दिनमा असल गर्नु ठीक हो कि खराब? ज्यान* बचाउनु ठीक हो कि ज्यान लिनु?” १० चारैतिर सबैलाई हेरेपछि उहाँले त्यस मानिसलाई भन्नुभयो: “तिम्रो हात पसार।” उसले त्यसै गऱ्यो अनि उसको हात सद्दे भइहाल्यो। ११ तर तिनीहरू रिसले पागल भए अनि येशूलाई के गर्ने भनेर आपसमा कुरा गर्न लागे। १२ ती दिनहरूमा उहाँ एक चोटि डाँडामा प्रार्थना गर्न जानुभयो र परमेश्वरलाई प्रार्थना गरेर पूरै रात बिताउनुभयो। १३ तर जब उज्यालो भयो, उहाँले आफ्ना चेलाहरूलाई बोलाएर तीमध्ये बाह्र जनालाई छान्नुभयो अनि “प्रेषितहरू”* भन्ने नाम पनि दिनुभयो: १४ सिमोन, जसलाई उहाँले पत्रुस भन्ने नाम पनि दिनुभयो र तिनका भाइ अन्द्रियास अनि याकूब, यूहन्ना, फिलिप, बारथोलोमाइ, १५ मत्ती, थोमा, अल्फयसको छोरा याकूब, जोसिलो भनिने सिमोन, १६ यहूदा, जो याकूबका छोरा थिए अनि यहूदा इस्करियोत, जो पछि धोकेबाज भयो। १७ अनि उहाँ तिनीहरूसित ओर्लेर समतल भूमिमा पुग्नुभयो। त्यहाँ उहाँका चेलाहरूको ठूलो भीड जम्मा भएको थियो। त्यसबाहेक, सारा यहूदिया र यरूशलेमबाट अनि टायर र सीदोनका तटवर्ती इलाकाहरूबाट आएका मानिसहरूको ठूलो जमात पनि त्यहाँ थियो। तिनीहरू उहाँको वचन सुन्न अनि आफ्नो बिमारी निको पार्न आएका थिए। १८ दुष्ट स्वर्गदूतहरूले सताएकाहरूसमेत सद्दे भए। १९ अनि भीडमा हुनेजति सबै जना उहाँलाई छुन खोजिरहेका थिए, किनकि उहाँबाट निस्केको शक्तिले तिनीहरू सबैलाई निको पारिरहेको थियो। २० तब उहाँले नजर उठाएर चेलाहरूलाई हेर्नुभयो र यसो भन्न थाल्नुभयो: “आनन्दित हौ तिमी गरिबहरू, किनकि परमेश्वरको राज्य तिमीहरूकै हो। २१ “आनन्दित हौ तिमीहरू जो अहिले भोका छौ, किनकि तिमीहरू तृप्त पारिनेछौ। “आनन्दित हौ तिमीहरू जो अहिले रुन्छौ, किनकि तिमीहरू हाँस्नेछौ। २२ “आनन्दित हौ तिमीहरू, जब मानिसहरूले तिमीहरूलाई मानिसको छोराको खातिर घृणा गर्छन्‌, बहिष्कार गर्छन्‌, तिमीहरूको अपमान गर्छन्‌ अनि दुष्ट भनी बदनाम गर्छन्‌। २३ त्यस दिन रमाओ अनि खुसीले उफ्र, किनभने हेर, स्वर्गमा तिमीहरूका लागि ठूलो इनाम छ। किनकि तिनीहरूका पुर्खाहरूले पनि भविष्यवक्ताहरूलाई त्यसै गर्ने गर्थे। २४ “तर धिक्कार तिमी धनीहरूलाई, किनकि तिमीहरूले जति सुखसुविधा पाउनुपर्ने हो, पाइसकेका छौ। २५ “धिक्कार तिमीहरूलाई जो अहिले तृप्त छौ, किनकि तिमीहरू भोकाउनेछौ। “धिक्कार तिमीहरूलाई जो अहिले हाँसिरहेका छौ, किनकि तिमीहरू शोक गर्नेछौ अनि रुनेछौ। २६ “धिक्कार, जब सबै मानिसहरूले तिमीहरूको तारिफ गर्छन्‌, किनकि तिनीहरूका पुर्खाहरूले झूटा भविष्यवक्ताहरूलाई त्यसै गर्थे। २७ “तर तिमीहरू जो मेरो कुरा सुनिरहेका छौ, म तिमीहरूलाई भन्छु, आफ्ना शत्रुहरूलाई प्रेम गरिरहो, तिमीहरूलाई घृणा गर्नेहरूको भलो हुने काम गरिरहो, २८ तिमीहरूलाई सराप्नेहरूलाई आशिष्‌ दिइरहो, तिमीहरूको अपमान गर्नेहरूका लागि प्रार्थना गरिरहो। २९ जसले तिम्रो एउटा गाला चड्काउँछ, उसलाई अर्को गाला पनि फर्काइदेऊ। अनि जसले तिम्रो खास्टो खोस्छ, उसलाई तिम्रो लुगा पनि लैजान देऊ। ३० तिमीसित माग्नेजति सबैलाई देऊ अनि तिम्रो मालसामान लैजानेसित ती फिर्ता नमाग। ३१ “यसबाहेक, मानिसहरूले तिमीहरूलाई जे जसो गरून्‌ भन्ने तिमीहरू चाहन्छौ, तिमीहरूले पनि तिनीहरूलाई त्यसै गर। ३२ यदि तिमीहरू आफूलाई प्रेम गर्नेहरूलाई मात्र प्रेम गर्छौ भने के नै ठूलो काम गरेका हुन्छौ र? किनकि पापीहरूले पनि आफूलाई प्रेम गर्नेहरूलाई प्रेम गर्छन्‌। ३३ अनि यदि तिमीहरूको भलो हुने काम गर्नेहरूको मात्र तिमीहरू भलाइ गर्छौ भने के नै ठूलो काम गरेका हुन्छौ र? किनकि पापीहरूले पनि त्यसै गर्छन्‌। ३४ त्यसैगरि, यदि तिमीहरू जसबाट फिर्ता पाउने आशा गर्छौ, तिनीहरूलाई मात्र विनाब्याज ऋण दिन्छौ भने के नै ठूलो काम गरेका हुन्छौ र? किनकि पापीहरूले पनि त सावाँ मात्र फिर्ता पाउने गरी पापीहरूलाई विनाब्याज ऋण दिन्छन्‌। ३५ बरु, तिमीहरू आफ्ना शत्रुहरूलाई प्रेम गरिरहो अनि तिनीहरूको भलो हुने काम गरिरहो, अनि विनाब्याज ऋण दिइरहो र केही फिर्ता पाउने आशा नगर। तब तिमीहरूले ठूलो इनाम पाउनेछौ अनि तिमीहरू सर्वोच्च परमेश्वरका छोराहरू हुनेछौ, किनकि उहाँ बैगुनी र दुष्टहरूप्रति दयालु हुनुहुन्छ। ३६ जस्तो तिमीहरूका बुबा कृपालु हुनुहुन्छ, तिमीहरू पनि कृपालु भइरहो। ३७ “यसबाहेक, अरूको न्याय गर्न छोडिहाल र कुनै हालतमा तिमीहरूको पनि न्याय गरिनेछैन। दोष लगाउन छोडिहाल र तिमीहरूलाई पनि कुनै हालतमा दोष लगाइनेछैन। क्षमा दिइरहो र तिमीहरूले पनि क्षमा पाउनेछौ। ३८ दिने गर अनि मानिसहरूले तिमीहरूलाई पनि दिनेछन्‌। तिनीहरूले तिमीहरूको पोल्टामा प्रशस्त गरी, खाँदी-खाँदी, हल्लाएर, पोखिने गरी हालिदिनेछन्‌। किनकि तिमीहरू जुन नापले नाप्छौ अरूले पनि तिमीहरूका लागि त्यही नापले नाप्नेछन्‌।” ३९ त्यसपछि, उहाँले तिनीहरूलाई एउटा दृष्टान्त पनि सुनाउनुभयो: “के अन्धाले अन्धालाई डोऱ्याउन सक्छ र? त्यसो गऱ्यो भने के दुवै जना खाल्टोमा खसदैनन्‌ र?” ४० चेला आफ्नो गुरुभन्दा श्रेष्ठ हुँदैन तर ज-जसले पूरा तालिम पाउँछन्‌ ती सबै आफ्नो गुरु जत्तिकै हुनेछन्‌। ४१ तिमी किन आफ्नो भाइको आँखामा भएको छेस्को देख्छौ तर आफ्नै आँखामा भएको मुढाचाहिं देख्दैनौ? ४२ यदि तिमी आफ्नै आँखामा भएको मुढा देख्दैनौ भने तिमी कसरी आफ्नो भाइलाई ‘ए भाइ, मलाई तिम्रो आँखाको छेस्को निकाल्न देऊ’ भन्न सक्छौ? ए कपटी हो! पहिले आफ्नै आँखाको मुढा निकाल अनि तिमीले आफ्नो भाइको आँखाबाट छेस्को कसरी निकाल्ने भनेर छर्लङ्गै देख्नेछौ। ४३ “किनकि असल रूखले बिग्रेको फल फलाउँदैन; त्यसैगरि, खराब रूखले राम्रो फल फलाउँदैन। ४४ हरेक रूख त्यसको फलबाटै चिनिन्छ। उदाहरणका लागि, मानिसहरूले काँडाको झाङबाट अन्जीर बटुल्दैनन्‌, न त जङ्गली झारबाट अङ्गुर टिप्छन्‌। ४५ असल मानिसले आफ्नो मनको असल भण्डारबाट असलै थोक निकाल्छ, तर दुष्ट मानिसले आफ्नो दुष्टताको भण्डारबाट दुष्टै थोक निकाल्छ। किनकि मनमा जे प्रशस्त छ, मुखले त्यही बोल्छ। ४६ “तिमीहरू किन मलाई ‘प्रभु! प्रभु!’ भनी पुकार्छौ तर मैले भनेजस्तो चाहिं गर्दैनौ? ४७ जो मकहाँ आउँछ र मेरो वचन सुन्छ अनि त्यसअनुसार गर्छ, ऊ कस्तो खालको मानिस हो, म तिमीहरूलाई बताउँछु: ४८ ऊ त घर बनाउने त्यो मानिसजस्तो हो, जसले गहिरो खाल्टो खनेर चट्टानमाथि जग बसाल्यो। जब बाढी आयो अनि नदीको धार त्यस घरमा ठोक्कियो, तब त्यसलाई हल्लाउन सकेन, किनकि त्यो बलियो गरी बनाइएको थियो। ४९ अर्कोतिर, जसले सुन्छ तर पालन गर्दैन, ऊ त्यो मानिसजस्तो हो, जसले जग नहाली जमिनमा घर बनायो। जब नदीको धार त्यस घरमा ठोक्कियो, तब त्यो तुरुन्तै ढल्यो र पूरै ध्वस्त भयो।”
^ लूका ६:९ * ग्रीकमा पुस्खे। अतिरिक्त लेख ७क हेर्नुहोस्।
^ लूका ६:१३ * वा, “पठाइएको जन।” ग्रीकमा “अपोस्टोलोस।”